Maitiro ekupinza iPhone mafoto kune yekunze hard drive uchishandisa Mac | IPhone nhau
Iwe uri mumwe weavo vasina kumbochengetedza backup yemafoto ako? Usashandise masevhisi seGoogle Mifananidzo kana iCloud syncing? Iwe unoda kuve nemifananidzo yese pane yekunze hard drive? Eya, nenhanho shomanene dziri nyore — uye mumaminiti mashomanene— unenge uine kopi yemifananidzo yako yese pane yekunze disk uchishandisa imwe yezvishandiso zvinouya zvakajairika neako Mac komputa.
Kazhinji, kunze kwekunge waremadza otomatiki kuvhurwa, Paunobatanidza yako iPhone kana iPad kune yako Mac komputa, iPhoto inovhura yakananga. Kana iwe uchida kuburitsa ako ese mafoto kune yako komputa yedhi hard drive, enda kumberi wobva wadzvanya kuendesa kunze. Nekudaro, kana iwe uchida kuti raibhurari yako yemifananidzo igarwe pane dhisiki rekunze, iwe unofanirwa kushandisa iyo "Image Capture" application (unogona kuiwana kubva kuapplication folda kana kubva kuLaunchpad).
Usati waenderera mberi, isu tinokuudza iwe kuti basa iri richakushandira mose chinjana mapikicha kune rakaomarara diski senge USB ndangariro, iyo yemukati hard disk yeMac, nezvimwe. Asi ngatitangei:
Unganidza iyo iPhone kune USB chiteshi cheMac
Uchaona kuti iyo iPhone inoonekwa mune iyo Image Capture sidebar uye otomatiki mifananidzo yese yawakachengeta mumemori yekombuta inoonekwa pachiratidziri. Rangarira izvo Ose mapikicha uye screenshots achaonekwa pamwe chete nemifananidzo iyo yawakagamuchira neWhatsApp, nezvimwe..
Pazasi peMufananidzo Capture, inoratidzira huwandu hwemifananidzo yauinayo pachigadzirwa uye iko kuenda kwekutora.
Dzvanya pabhokisi rekuenda uye tsvaga "Vamwe ...". Zviri pano kwaunogona kusarudza yekunze hard drive iwe yaunoda kushandisa uye kana iwe uchida kuendesa mifananidzo yese kune yakasarudzika folda
Kamwe iko kuenda kwaasarudzwa, iwe unofanirwa chete tinya pane bhatani rekuti «Import» uye mumaminetsi mashoma iwe unenge uine kopi yekuchengetedza yemifananidzo yako uye unogona kuadzima kubva mundangariro yemukati ye iPhone yako kana iPad
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro Ekutora Mapikicha kubva kuI iPhone kuenda Kunze Hard Dhivha Uchishandisa Mac
Iwe unovhura iyo Photos App, iyo iPhone inobuda kuruboshwe uye iwe unogona kuona iwo mafoto kubva kuiyo iPhone, kuteedzera kana kutumira kunze
Uye nenzira iyi zuva rekugadzirwa kwemufananidzo rakachengetedzwa?
Nekuti kuiburitsa kubva kumifananidzo hakuwanzo kuchengetedzwa
Kwakanaka, ini ndaitarisa uye ichi ndicho chakanakisa, ini ndaisaziva kuti nzira iyi yaivepo. Zvese zvakanaka uye zvakatsigira angu 5000 mafoto.
Zvinotora nguva yakareba sei kutumira iwo zviuru zvishanu mafoto? Ndiri mukati maro uye yave kupfuura hafu yezuva
Pindura kune sair
Kutenda kwazvo!! Pakupedzisira nzira yakapusa
Nemapikicha app, ndaifanira kuendesa kune komputa uyezve kune yakaoma disk ... kuva nemazana gumi nemaviri mafoto raive basa risingabviri.
Nenzira iyi nekudzvanya kamwe zvakatogadziriswa.
Pindura kuna vivi
Ini ndinoedza seizvi uye mumufananidzo wekutora app ini ndinoona Kuvhura pane iyo iPhone, uye handigoni kuenderera .. Zvakamboitika kune chero munhu?
Yakanaka tip! Kurumidza uye nyore. Yakakwana yekutsigira kumusoro kwekunze madhiraivha. Ne Mac Mac app, ini handina kukwanisa nekuti ndakadzikora dzakananga pakombuta uye ndikati inoda imwe nzvimbo.
Ndanga ndichifunga kuti ndozviita sei kwenguva yakareba.Ndatenda zvikuru kune iyo info! Zvakandishandira zvachose
Izvo hazvishande kwandiri, ini ndinoisa vamwe uye yangu yekunze hard drive asi inoitumira iyo kune komputa
Pindura kune isma
Kutenda kwazvo! Yakanga isati yambondishandira kubva ku Mifananidzo uye, chero ndakazviita kubva kuWindows (ini handigone kuwana imwe) kana yakarova nhare yangu ... ini ndanga ndatova nemifananidzo 18.000! Inonyanya kubatsira.
Ini ku akadaro
Chekutanga pane zvese, ndinokutendai zvikuru nezano, mune rangu rubatsiro rwakakura nekuti kunyangwe ndanga ndiine Mac neIphone kweanopfuura makore gumi, nyaya yemifananidzo ichiri kundirwisa :) Vanofanira kuita kuti ive yakajeka , mukufunga kwangu!
Pandinobatanidza foni inondiudza kuti ndine Zvinhu 1900 asi kana ndine 6000, pane anoziva here kuti sei ????
Mhoroi, maita basa kwazvo nemaitiro acho. Kwenguva yakareba ini ndanga ndichitsvaga iri nyore nzira yekuitisa iyi uye zvaiita kunge zvisingaite. Iye zvino ini ndinogona kusevha nzvimbo pafoni yangu ndisingatombofanira kuenda kuburikidza neiyo Photos APP pane yangu mac.
Ndinokuda, maita basa
China inovandudza mutero wayo wekufambisa kudyara nemakambani akaita seApple
Saurik inosimbisa kuti kuchave neanosvika matatu maturusi ejeri kupaza iOS 11